Daldalli meeshaalee qulqullina hinqabnee Itoophiyaa keessatti rakkoo guddaa ta'eera - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Daldalli meeshaalee qulqullina hinqabnee Itoophiyaa keessatti rakkoo guddaa ta’eera
Daldalli meeshaalee qulqullina hinqabnee Itoophiyaa keessatti rakkoo guddaa ta’eera
Daldalli dhimma meeshaa qulqullina qabu ykn dhugaa daandii seeraa qabeessaan wolgeeddaruu qofaa irratti kan hundaayee miti. Dhimma woljijiirraa, bittaa gurgurtaa, kana keessatti wontoota seera dabsan, safuu cabsan heddutu ta’a; meeshaa kan sobaa fi qulqullina hinqabne, maallaqa kijibaa, saamichaa fi loogii adda addaatu adeemsifama- maqaa daldalaatiin. Kanniin gocha baadii kana irratti bobba’an gosa heedu qabu. Irra jireessi isaanii daldaltoota bu’aa ari’uu malee ummataa fi dantaa hinqabneedha. Kubbaaniyoonnii fi angawwoonni mootummaas, sadarkaa adda addaatti, kanniin badii kana deggaran ykn osoo argan bira dabranidha. Sababni isaas gocha yakkaa kana irraa faaydaa argatu ykn dantaan isaanii kallattiidhaan hindanqamu waan ta’eef.
Gochi qaamolee asii olitti tuqamaniin raawwatu bu’aa fi faaydaa ummataa danquu bira ce’ee badii fi balaa garagara hawaasa fi biyyattii irra geessa. Yoo daldalaan tokko maallqa soba ‘counterfeit’ gabaa keessatti gadi lakkisu hiyyeessi kasaaruu bira ce’ee mana hidhaatti darbamuunis nimala. Yeroo tokkoon kasaaraa lama galmeessise jechhudha. Yoo dawaan sobaa gurguramu kan dhibame dawicha fudhateef gara fayyaatti osoo hin taane gara du’aatti kan adeemu. Nyaata qulqulina hinqabne nyaachuun balaa, keessumaayyuu daa’imman irratti, maal akka qabu hunduu beeka. Egaa hojii gadhee akkanaa irratti bobba’uudhaan hedduun ‘daldalatootaa ykn kubbaaniyootaa’ kan horii wolitti qaban. Hundi daldalaa hujiin isaa kana jechuu akka hintaane hubadhaa. Garuu, daldaltoota meeshaa ykn tajaajila dhugaa fi qulqullina qabu laatan irra worri sobaa fi saamichaa heddumaattuu, baay’atuudha kan qorannoon agarsiisu.
Itoophiyaa keessatti meeshaaleen dukkaana tokkoo bayu 75% meeshaa sadrkaa isaa hineegne ykn qulqullina hinqabne ta’uudha kan gabaafamu. Kanniin rakkoo meeshaa qulqullina hinqabne kanatti dhimma bahuuf dirqaman namoota dhuunfaa qofa osoo hintaane dhaabbilee mootummaas ummatauma woliin rakkoo kana daakaa jiru. Wolumaa galatti, biyyattiin meeshaalee biyya alaatii galanii fi biyya keessatti omishaman kanniin qulqullina hinqabneen liqimfamteerti. Halli jiru heddu yaachisaadha.
Meeshaaleen qulqullina hinqabne, garu gabaa irratti bay’inan argaman, fakkeenyaaf konkolaataa fi maashinoota, dawaalee addaddaa, nyaataa fi dibata. Rakkoon kanniin qofarratti kan daangaffamee miti. Wonti ummani barbaadu, gabaa irratti hedduu argamu kan rakko kaaf hinsaaxilamne jira hinfakkaatu. Daldaltoonni kunniin meesha qulqulllina hinqabne omishuu bira ce’anii maqaa bebbeekkamoo, keessattuu isa biyya alaa, meeshaa isaaanii irratti maxxansuudhaan gabaa irra oolchuu irraas ufhinqusatan.bifa kanaan ummata gowwoomsu, akka fedhasaaniitti dhamaasu.
Burqaan sababa babal’achuu rakkoo meeshaa qulqullina hinqabne kuni hir’inna too’annaa fi seera jiru hujii irra ooluchuu irraa kan madde. Yoo wonti daldaltoonni gurguran hii too’tamne, qulqullini isaa hin illalamne, kan seera cabse hinqabamne namoonni meeshaa sobaa gurguruu mitii dirqiinis nama saamuu irraa uf hintiksani. Gama birootiin, angawoonni fi daldaltoonni bebbeekamoonis waan kana keessaa harka qabaachuu isaaniiti kan daran rakkoo kana too’annaan ala taasisaaru.
Kanniin daldala sobaa irratti bobba’an hundi ni argatu. Egaa biyyaa fi ummata kan hedduu rakkatu.
meeshaalee qulqullina hinqabne
meeshaalee sadrkaa hineegne
Previous articleSteefen Hokiing roobootonni (Artificial Intelligence) dhabamiinsa sanyii namaaf sababa ta’uu danda’u jedha
Next articleNaannolleen [states] Ameerikaa 17 perezidaant Baarak Obaamaa irratti himannaa dhiheessan